Goobaha leh midabada midabka leh ee UI | Abuurista khadka tooska ah
Waqtigu siduu usocdo gradient wuxuu maareeyaa inuu helo boos aad iyo aad u badan Naqshadeynta websaydhka dhexdiisa, waa sababta maqaalkan uga hadli doonno arrintan, si aan kuugu fududeyno.
Haddii aad ku jirtay adduunka naqshadeynta webka dhowr sano ama haddii aad fiiro gaar ah u leedahay dhammaan isbeddelada naqshadaha ay soo korayeen Sanadihii la soo dhaafay, waxaad ogaan kartaa in midabada wehliyaha Way soo noqdeen oo aad ayey ugafiican yihiin wixii aan dhowr sano kahor helnay. Digniin la'aan iyo si lama filaan ah waxay umuuqataa sidii miisaanka jiifka uu la soo noqday wax walba, maadaama uu ka muuqdo meel kasta, asal ahaan naqshadaha UI webka.
Wejigu wuxuu ka mid yahay naqshadaha naqshadeynta sanadka 2017Si kastaba ha noqotee, kuma sameyneyso qaabkii markii hore loo isticmaali jiray, laakiin qaab aad u badan oo kafiican oo casri ah.
Sidaa darteed, si lagaaga caawiyo inaad hesho istiraatiijiyad ku habboon mashruucaaga soo socda Naqshadeynta websaydhka, waxaan ku tusaynaa saddex goobood oo bixiya midabbo midab leh oo midab leh.
WebGradients waxay ka kooban tahay degel bilaash ah, kaas oo waxaa ku jira in ka badan 180 midab oo midab leh Shaarafyada toosan ee isu roga kuwa ka qurux iyo qurux badan kuwa kale oo aan u adeegsan karno dhibaato la'aan.
Qodobbada wanaagsan ee laga helayaa waa:
Waxay leedahay koodhka HEX.
Waxay ku habboon tahay shabakadda, tan iyo muuji lambarka CSS3 gebi ahaanba diyaar u ah inaad nuqul ka sameyso boggaaga.
Waxay leedahay PNG.
UiGradients waxay isu rogtaa goob aad ugu eg WebGradients, kaas oo sidoo kale leh tiro ballaaran oo kala duwan oo ah midabada midabbada midabka leh iyo sidoo kale loo isticmaalo si isku mid ah.
Farqiga kaliya ee u dhexeeya uiGradients iyo WebGradients wuxuu kujiraa xaqiiqda ah in mid kasta oo ka mid ah adeegsadayaashu ay leeyihiin suurtagalnimada inaad abuurto websaydh kuu gaar ah sidaasna dad kale ayaa sidoo kale uga faa'iidi kara.
Waxay soo bandhigaysaa nambarka CSS gebi ahaanba diyaar u ah in la soo guuriyo oo lagu dhajiyo dadka isticmaala.
U oggolow isticmaaleyaasha inay dhisto dariiqa u gaarka ah.
Isku dhafka, isticmaalayaasha ayaa fursad u leh u sharrax naftooda keliya maahan midabyadooda laakiin sidoo kale jadwalka kuwan ka mid ah. Boggan wuxuu u shaqeeyaa sida soo socota: waxaad dooraneysaa laba midab, waad gujisaa "Isku dar" iyo voila, wejigu waa diyaar.
Waa wax la taaban karo, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon daawashada degdegga ah.
Bandhigaa Lambarka CSS sida kuwa kale, gabi ahaanba diyaar u ah isticmaalayaasha inay nuqul ka sameystaan ​​oo dhajiyaan.
Waxay leedahay qaab muuqaal iyo muuqaal toosan ah.
Saddex degel oo aan hubno waxaad heli doontaa faa'iido weyn naqshadahaaga soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waraaqaha midabaynta » Goobaha leh midabada midabka leh ee UI